गायक ईश्वर पोखरेलले अष्ट्रेलियामा कसलाई भने माया गर्छु भनेर ? (भिडियो सहित) | Sambad Media
गायक ईश्वर पोखरेलले अष्ट्रेलियामा कसलाई भने माया गर्छु भनेर ? (भिडियो सहित)
गायक ईश्वर पोख्रेलको गीती एल्वम “उडान” मा रहेको गीत “माया गर्छु भनी देउन”को भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
उनले अष्ट्रेलियाबाटै उक्त गीतको रेकर्डिङ तथा छायाङ्कन गरेका हुन् । गत साल सेप्टेम्बेरमा एक सभ्य अनि भव्य कार्यक्रमका बिच गीती एल्वम ‘उडान‘को सिड्नी, अस्ट्रेलियामा बिमोचन गरिएको थियो । हालै मात्र सार्वनजिक भएको उक्त गीत मायाप्रेममा आधारीत पप गीत हो । जसमा प्रदिप चापागाईको शब्द, कल्याण सिंहको संगीत रहेको छ ।
गीतमा मोडल प्रदिका श्रेष्ठ र निश्चल खड्काको अभिनय रहेको छ । मनोज अधिकारीले निर्देशन गरेको भिडियोको सम्पादन प्रबिन श्रेष्ठले गरेका छन् । सौरभ मानन्धरले छायाङ्कन गरेको उक्त भिडियोलाई गायक पोख्रेलले आफ्नै युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।
२०३९ साल पुष ५ गते गुल्मीमा जन्मिएका गायक पोख्रेलको बाल्यकाल भने बुटबलको मणिग्राममा बित्यो । उनी सन् २००१ मा जानुपर्यो मत लाहुर बोलको गीतबाट संगीत क्षेत्रमा प्रवेश गरे । हालसम्म ३ दर्जन गीतमा स्वर दिएका गायकलाई रातो रिवनु, काली मोरीु, मर्ने बारे जस्ता गीतले चर्चामा पुर्यायो । उनी करिब ८ बर्षदेखि नै अष्ट्रेलियामा बस्दै आउका छन् । र पछिल्लो समय अष्ट्रलियाबाटै कयौँ गीतहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनी सन् २००९ मा अष्ट्रेलिया प्रवेश गरेका हुन् । लामो समय अष्ट्रेलियामाा बस्दै आएतापनि उनले नेपाली गीत संगीतलाई भने भुल्न सकेनन् । र आफु जुन ठाँउमा गयो त्यहि ठाँउबाटै गीतसंगीतलाई योगदान दिन लागे । उनले सन् २००४ मा नेपालबाटै सित्तल तथा अराइज एल्मब सार्वजनिक गरे ।
तर उनको अधिकांश गीतहरु भने नेपाल बाहिरैबाट सार्वजनिक भएका छन् । नेपालबाहिरबाट गीतसंगीतमा लाग्न केहि गाहृो हुने उनी बताउँछन् । नेपालबाहिरबाट गीत गर्दा आफुले सोँचेजस्तो गीत गर्न नपाइने, सोँचेको तरीकाले रेकर्डिङ तथा संगीत भर्न नपाईने उनी बताउँछन् । साथै काम गर्दै गीतसंगीतलाई समय दिनुपनि गाहृो हुने उनी बताउँछन् । तरपनि गीतसंगीतको तिर्खा तथा चाहनाले उनलाई जस्तोसुकै कठिनाई परिस्थितीलाई पनी सामना गर्ने उर्जा दिएको छ ।